Okisijeni Kugadzirwa midziyo
Small VPSA Kwezvokudya Nemiti Plant
Denitration kushandisa ozone denitration michina
The denitrification kurapwa Kwaiitirwa kushandisa oxidative denitrification mabikirwo vanoshingaira mamorekuru (ozone) kuti vabudirire nangananga Nox achine mitemo. Panguva iyoyowo, iyo achifurira zvikonzero okisijeni wevasungwa, kutonhora mvura tembiricha uye bhaira mutoro shanduko vakanga vakaongorora. Zvabuda akaratidza kuti kana adsorption kufurirwa uye desorption kwokudzvinyirira kwomunhu VPSA okisijeni jenareta vaiva 40-48 kPa uye -45-55 kPa, yakachena wevasungwa asvika Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri kukosha pamusoro 92%. Kutonhora tembiricha mvura haafaniri kupfuudza 32 ° C. Panguva imwe cheteyo, zvinonzi wakatangwa kuti Nox achine anogara achiita zvaidiwa quantitative kudzora pabhenji kundosangana bhaira mutoro kuchinja.
Nengano promulgation ari "Action Plan nokuda Madzivirirwe Nemaderedzerwe pakati Atmospheric Kusvibisa" uye mberi rutapudzo pamusoro akabuda flue gasi Zvinosvibisa kubva marasha-vanogumurwa boilers, kudzora senitrogen oxide Nox yave mberi hwakavandudzika. UYU pari rudzi denitrification michina pamwe inonyatsobudirira kubviswa kunyatsoshanda. Zvisinei, kana kutevera chinangwa akaderera Nox anobuda, ruzivo urwu achaita kunyanya amoniya pitikoti nokuda kwayo yokusafa vaiitawo uye gogonera chokubuda munda. Panguva iyoyowo, sezvo nokuva gombedzero vachizvitakudza kunowedzera, kutendeuka mwero SO2 kuti SO3 kunowedzera, uye yokupedzisira utsi Zvakawanikwa wevasungwa pakati NH3 uye SO3 vari gasi yatichawana kutowedzera jamming dzedenga preheater. The oxidative Michina denitrification kwakavakirwa yakaderera tembiricha vanoshingaira mamorekuru zvakanaka chaizvo kudzivisa pamusoro matambudziko. Vakasiyana SCRs, vanoshingaira mamorekuru (akadai O3) vari pezvakaitwa kuti synergistic Mabatirwo flue gasi kubudikidza oxidation kuti Zvinosvibisa akadai NO uye inorema simbi. Izvi hazvina chokuita mhando bhaira, chinangwa kurapwa ndiwo gasi muswe ari bhaira, iyo oxidation pakati NO uye inorema nesimbi iri flue gasi yakakwirira-mutengo Nox uye simbi oxides, uye ipapo Kufambisa pakati Zvinosvibisa akadai Nox, SO2, uye rinorema simbi. Bvisa.
In neKwayedza, vanoshingaira oxidative denitration michina yakashandiswa kudzidza Nox achine rokudzora marasha-vanogumurwa flue gasi, uye zvinhu zvine chokuita denitration kunyatsoshanda akadai okisijeni wevasungwa, kutonhora mvura tembiricha uye bhaira mutoro shanduko vakanga vakaongorora.
1, kuvandudza chirongwa
The yepakutanga bhaira ane simba chirimwa riri 2 anoita 35t / h uye 1 iine 50t / h cheni hwechoto. Chepakutanga nyoro desulfurization hurongwa anoshandisa kutaridza reraimu gypsum nzira SO2 rokubvisa. The achishingaira samolecular oxidative denitration zvemichina rinoshandisirwa muswe flue mushure flue gasi confluence. Naizvozvo, chete flue gasi kuyerera mwero uye senitrogen oxide zviri muswe flue vanofanira kuonekwa, inova yakazvimirira combustion kwadzinoita ari bhaira. Uchishandisa yepakutanga desulfurization zvokushandisa, chete chepakutanga flue gasi desulfurization shongwe Inlet flue akanga dzakachinjwa uye chinoshingaira samolecular reactor paakagadzwa. Vamwe transformations itsva mano sezvinoratidzwa Figure 1. Kwezvokudya Nemiti hurongwa, vanoshingaira samolecular hurongwa, kutonhora mvura maitiro uye zvemagetsi uye chiridzwa kudzora ebetsero gadziriro. The okisijeni Hurongwa anoshandisa adsorbent vaparadzane okisijeni uye senitrogen mu dzedenga adsorption uye desorption chokubudisa yakakwirira yevasungwa reokisijeni. Mushure pressurization, deoiling, uye kubviswa guruva, yakachena anopinda basa samolecular jenareta, uye pakupedzisira zvinoshingaira Morekuru (O3) iri yakawanikwa kuburikidza rushoma kukangamwirwa zvinoyerera mukamuri. Okuyerera mukuru-voltage magetsi kuti okisijeni iri kuerera mukamuri zvinowanisa yakawanda kupisa, saka kutonhora mvura zvokunze kunodiwa kuti vakuchidzire-kurapa zvinoyerera mukamuri kuwedzera wevasungwa yezviri Morekuru (O3).
Denitration kushandisa ozone denitration techn ...